चर्चित गु ण्डा नाईके ‘ड’न’ सत्यमान लामा प’क्रा’उ – PathivaraOnline
Home > समाचार > चर्चित गु ण्डा नाईके ‘ड’न’ सत्यमान लामा प’क्रा’उ
चर्चित गु ण्डा नाईके ‘ड’न’ सत्यमान लामा प’क्रा’उ
admin February 18, 2020 समाचार	0
काठमाडौं, ६ फागुन । काठमाडौंमा च न्दा आ तं क र गु ण्डा गर्दीका कारण चर्चित समेत बनेका गु ण्डा नाइके सत्यमान लामा प क्राउ परेका छन् । मा दक पदार्थ सेवन गरी प्रहरीसँग वि वाद गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई होटल सांग्रिला अगाडिबाट नि य न्त्र णमा लिएको हो ।
काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका–६, स्थायी घर भई बालुवाटार बस्दै आइरहेका तामाङ यसअघि असार १७ गते ठगी आरोपमा प क्रा उ परेका थिए । काभ्रेली समूहका लामालाई महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जबाट खटेको प्रहरी टोलीले प क्रा उ गरेको जनाएको छ ।
सत्यमान प्रहरीको उच्च निगरानीमा रहँदै आएका छन् । यसअघि सत्यमान लामा काभ्रेली ‘ड न’ दावा लामासँग रहेर काम गर्दै आएका थिए । दावा लामा फ रा र भएपछि सत्यमानले हर्कत गर्दै आएका छन् ।
सत्यमानले काठमाडौंमा गु ण्डा गर्दी गर्ने गरेको आरोप छ । सत्यमान यसअघि पनि पटक पटक लु ट पा ट, गु ण्डाग र्दी तथा अ वैध डलर कारोबार प क्रा उ परिसकेका छन् । सत्यमान काभ्रेकी सांसद् नवीना लामा निकट मानिन्छन् । उनलाई नवीनाले दुई–तीन पटक जिम्मेवारी लिएर छुटाइसकेकी छिन् ।
काभ्रे र रामेछापमा पाइने बुद्धचित्त मालाको त स्क रीमा समेत संलग्न सत्यमानले गत वर्ष काभ्रे सिपालीका किसानको माला लु टे का थिए । सत्यमानलाई प्रहरीले रक्तचन्दन त स्क रीमा पनि प क्रा उ गरेर का र बाही गरिसकेको छ । महानगरीय अ प राध महाशाखामा उनीविरुद्ध बुढानिलकण्ठका दिलीप लामाको २५ लाखको चेक धम्क्याएर लु टे को उजुरी परेको छ ।
मुना ह’त्याका’ण्डः अर्जुन कार्कीलाई गिरफ्तार गरि हड्कडी लगाउनुस् भन्दै यसरी गर्जिए आङकाजी (भिडियो सहित)
फेरि टिप्पर आतङ्क: मोटरसाईकल चालकको दुःखद निधन !
सुन पैसा सहित परपुरूषसँग भागेकि आमालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय नै पुगे छोराछोरी (भिडियो सहित)
हेर्नुहोस यस्तो त छ नेपालमा कानून !!पैसाको बलमा १३ वर्षीय बालिकाको बलात्कारी छुटे – कृपया यसको घोर बिरोध गरेर शेयर गरौ